IGerman, Germany Hill Everest kanye nezintaba zomhlaba - GERMANX
Everest Hill nezintaba emhlabeni
kholp ukuthola $
« : Januwari 14, 2008, 01:50:36 am »
Intaba yidwala elingamamitha okungenani angama-500 ukuphakama kunendawo ezungezile.
Igama elinomsuka olimini lwethu olususelwa egameni elithi "tai" ngesiShayina lifake ulimi lwethu njengethegi futhi selisetshenziswe namuhla ngesikhathi.
Kunezintaba eziningi emhlabeni futhi isizathu sokuvela kwazo sehlukile. Ezinye izintaba zenziwa ngokucindezelwa komhlaba, kanti ezinye izintaba zakhiwa udaka oluza emhlabeni lubanda. Umthombo wentaba-mlilo ungumsindo oshisayo kakhulu obizwa ngokuthi i-magma.
Akuzona zonke izintaba ezisemhlabeni kuphela. Amanye amaplanethi nawo anezintaba. IMount Everest, isiqongo esiphakeme kunazo zonke ezintabeni zaseHimalaya, ingamamitha angama-8848 ukuphakama.
Isiqongo esiphakeme kunazo zonke emhlabeni, Izintaba ze-Everest, sehlukaniswe ngamaqembu amabili:
Izintaba Ezide Kunazo Zonke Emhlabeni
I-Everest, (iTibetan: Chomolungma), intaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni. Itholakala e-Himalaya, cishe ngama-28 degrees degrees latitude latitude kanye nama-degree angama-87 empumalanga, emngceleni weChina-Nepal. Imifula engenalutho eningizimu-mpumalanga, empumalanga nasentshonalanga ifinyelela ezindaweni zayo eziphakeme e-Everest (8.848 m) naseningizimu (8.748 m). INtaba i-Everest ibonakala ngokuphelele kusuka eThafeni laseTibetan (cishe amamitha ayi-5.000 XNUMX) enyakatho-mpumalanga. Iziqongo ezinjenge-Çangtse, iKhumbutse, iNuptse neLhotse ezikhuphuka emagqumeni ayo ziyayivimba ukuthi ibonwe isuka eNepal.
Intaba, abaseTibet ababeyibiza ngokuthi yi-Çomolungma, okusho ukuthi "Unkulunkulukazi Ongumama Womhlaba" ngenxa yesakhiwo sayo esihle nokuphakama, yayiyindawo ephakeme kunazo zonke emhlabeni, kepha yanqunywa ngezilinganiso zokuphathwa kwe-cadastral yaseNdiya ngo-1852. Ukuphakama okwamukelwe namuhla kungama-8.848 m nge-margin yephutha elincane.
Ukwakheka kwamaGreat Himalaya kwaqala ngokucindezelwa emabhesheni omhlaba we-sedimentary abangelwa ukuhlangana kwezwekazi laseNdiya kanye neTibetan Highlands eMiocene Division (eminyakeni engaba yizigidi ezingama-26-27 edlule). Ezigabeni ezilandelayo, amanabukeni kaKathmandu kanye neKhumbu (amaphuphu emithambeka ephukile futhi agumbuqelwe) acindezelwa abheke phezulu futhi agoqene abuye akhe izintaba zokuqala. Ukukhuphuka okuphelele kobukhulu bomhlaba enyakatho kukhuphule ukuphakama kwendawo. Ngokuphinda kugoqwe amanabukeni, yonke indawo yambozwa ungqimba olusha, kwathi iMount Everest yavela esigabeni saseMahabarat sePleistocene Division (cishe eminyakeni eyizigidi ezi-2,5 edlule). Izendlalelo zelimestone ezihlukaniswe nezinye izidalwa ezinama-semi-crystalline kusukela ekupheleni kwesikhathi seCarboniferous Period (cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-345-280 edlule) nokuqala kweNkathi yePermian (eminyakeni eyizigidi ezingama-280-225 edlule) zakhiwa yi-synclinal stratification. Ukwanda okuqhubekayo okubangelwa lokhu kwakhiwa, okuqhubeka nanamuhla, kulinganiswa nokuguguleka.
INtaba i-Everest idlula izingxenye ezimbili kwezintathu zomkhathi womhlaba futhi ifinyelela ezingxenyeni ezingenhla lapho umoya-mpilo ungaphansi. Ukuntuleka komoya-mpilo, imimoya enamandla nokubanda kakhulu akuvumeli noma yisiphi isilwane noma isitshalo ukuthi siphile emithambekeni engenhla. Ngesikhathi semvula yasehlobo, iqhwa liyashwabana futhi linqwabelene ngumoya. Njengoba le mifudlana yeqhwa ingaphezu kwentambo yokuhwamuka, imicengezi emikhulu yeqhwa ephakela izinguzunga zeqhwa ngokuvamile ayakheki. Ngenxa yalesi sizathu, izinguzunga zeqhwa zase-Everest zondliwa kuphela ngama-avalanche avamile. Yize izingqimba zeqhwa ezisemithambekeni yezintaba ezihlukaniswe yimikhawulo emikhulu zimboza yonke imithambeka phezulu eziqongweni zentaba, kancane kancane zidonswa ukuguquka kwesimo sezulu ngokuhamba kwesikhathi. Phakathi nezinyanga zasebusika, umoya onamandla osuka enyakatho nentshonalanga ushanela iqhwa, okwenza isiqongo sibukeke singenalutho.
Izinguzunga zeqhwa ezinkulu eMount Everest nase-Ama Dablam Mount Everest yiKangşang Glacier (empumalanga), iMpumalanga neWest Rongbuk Glaciers (enyakatho nasenyakatho ntshonalanga), iPumori Glacier (enyakatho-ntshonalanga), iKhumbu Glacier (entshonalanga naseningizimu), nesigodi seqhwa esivaliwe phakathi kwe-Everest kanti umhosha iLhotse-Nuptse yiWestern Iceberg.
Amanzi avela ezintabeni asuka eningizimu-ntshonalanga, izinkomba zasenyakatho nasempumalanga namagatsha aphambuka komunye nomunye. IKhumbu Glacier liyancibilika futhi lijoyine uMfula iLobucya Khola eNepal. Lo mfula, othatha igama elithi Imca Khola, ugeleza ubheke eningizimu bese ujoyina umfula iDudh Kosi. Umfula iRong Zhu eChina ukhuphuka emithonjeni yeqhwa iPumori neRongbuk emithambekeni ye-Everest, iKarma Qu River kanye neKangsang Glaciers.
Imizamo yokukhuphuka i-Everest yaqala ngo-1920 ngokuvulwa komgwaqo iTibet. Okokuqala, iqembu elasekelwa yiRoyal Geographical Society neKomiti Yezintaba Ehlanganisiwe yaseHimalaya lafinyelela umvuthwandaba ngo-1953. NgoMeyi 29, 1953, u-Edmund Hillary waseNew Zealand noTenzing Norgay waseNepal bakhuphuka umqansa oseningizimu-mpumalanga, bewela isiqongo saseNingizimu futhi bafinyelela kuvuthondaba lwaso. Abaqali basebenzise amasistimu oksijini wesifunda avulekile navalwe, izicathulo nezingubo ezifakwa ngokukhethekile, namadivayisi omsakazo aphathwayo phakathi nalokhu kukhuphuka. Ngemuva kwalolu suku, amaqembu amaningi ezintaba asekelwa amazwe ahlukahlukene akwazi ukufinyelela kuvuthondaba.
Umqali izintaba wokuqala waseTurkey owakhuphuka e-Everest kwakunguNasuh Mahruki ngoMeyi 21, 1995. UmTurk wokuqala owakhuphukela engqungqutheleni esuka eNepal kwakunguTunç Fındık, owagibela ngoMeyi 23, 2001. U-Elif Eylem Maviş waba ngowesifazane wokuqala waseTurkey ukukhuphuka e-Everest ngoMeyi 15, 2006. Umqansa ofanayo yingqungquthela yokuqala ye-Everest yiqembu laseTurkey. Leli qembu liphinde lazama ukwenza umqansa wokuqala ongenawo umoya-mpilo womqali wezintaba waseTurkey, kepha alizange lifinyelele kulo mgomo. Ngo-2007, ngesikhathi semicimbi yokugubha iminyaka engu-100 yeFenerbahçe Sports Club, uTunç Fındık noMustafa Kalaycı bakhuphuka iMount Everest ndawonye. Lokhu kube ngumqansa wesibili weTunç Fındık e-Everest.
Ume iminyaka engamakhulu amane, vele!
Imikhonto eyizinkulungwane eziyikhulu
Re: Mount Everest kanye nezintaba ezisemhlabeni
« Phendula #1: Januwari 14, 2008, 01:52:02 am »
Woooooooooowww, die Bergen auch noch !! Du bist der Beste! UDanke schön!
« Phendula #2: Januwari 14, 2008, 02:13:45 am »
IBitte schön mein Freund.
« Phendula #3: Ngo-Ephreli 19, 2016, 08:19:52 pm »
Ngizwile ukuthi i-Everest ingenye yezindawo eziyingozi kakhulu emhlabeni. Abantu abaningi baze balahlekelwa izimpilo zabo lapha. Kepha kuyangimangaza lokho manje ngisho ne-Everestikhaya lezidumbu ezingaphezu kuka-200. Ngokuzimisela, akekho umuntu othatha lezi zidumbu futhi lezi zidumbu ziseqhweni, lokhu kwenzeka ngokuphelele ezweni lanamuhla. Angikaze ngicabange ukuthi isimo esinje singenzeka, ngizimisele kakhulu, ngamangala impela lapho ngithola ngaso.